नक्कली डाक्टर बनेर सिफारिस गर्ने एक व्यक्ति पक्राउ – Himalitimes
२०७७ फाल्गुन ३ १५:०७ मा प्रकाशित
काठमाडौं। नक्कली डाक्टर बनेर सिफारिस गर्ने एक जनालाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोको टोलीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा अर्घाखाँचीको मालारानी गाउँपालिका-८ घर भई हाल काठमाडौं-३ कान्ति संगममार्ग बस्ने ३६ वर्षीय जितेन्द्र पन्थी छन्।
पन्थीले नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट लिनुपर्ने स्थायी दर्ता प्रमाण पत्रको लागि निवेदन दिँदा डा. कृष्ण रिजालको निवेदनमा डा. जितेन्द्र पन्थी लेखेर हस्ताक्षर गरेको खुलेको ब्यूरोका प्रवक्ता एसपी गंगा पन्तले जानकारी दिइन्।
पन्थीले नक्कली डाक्टर बनेर हस्ताक्षरसहित मेडिकल काउन्सिलको दर्ता नम्बर २३६४ लेखेर सिफारिस गरेको खुलेको ब्यूरोले जनाएको छ। नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट लाईसेन्स प्राप्त नै नगरी डाक्टर भनि सहिछाप गरेकोले पन्थीविरुद्ध लिखत सम्बन्धी कसुरमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट म्याद लिई अनुसन्धान भइरहेको ब्यूरोले जनाएको छ।